Fitaovana famokarana teknolojia Hi-Tech sy fitaovana fitsapana
Casing Production Production
Coil Flaw Monitoring
Auto-welding ny Tube sy Plate
SPL dia namokatra fifanakalozana hafanana nandritra ny 20 taona. Manana ny fikarohana ao an-trano sy ny fahafaha-mivoatra izahay, ary koa ny ambaratonga mandroso eo amin'ny sehatry ny indostria, ny fitsaboana ny hafanana, ny milina, ny fizahana ara-batana sy simika, ny fahaizana mifehy ny kalitao.
Izahay dia manolo-tena hanangana orinasa kilasy voalohany, hanao vokatra kilasy voalohany. CTI (Cooling Technology Institute) avy any Etazonia dia manamarina ny trano fijanonanay isan-taona, ny fahombiazan'ny vokatra sy ny serivisy kalitao dia mahatonga anay mpamokatra lehibe any Sina.
Tetikasa fanamafisana ny etona voajanahary voalohany ao Shina ao CNOOC.
Tetikasa famokarana solika diôzôida voalohany ao Shina any Mining Andrefana.
Tetikasa fambolena acetate acetate voalohany ao Shina ao Xinfu Bio.
• 55% Aluminium—— Tombony: fanoherana ny hafanana, androm-piainana lava.
• 43,4% Zinc—— Tombony: fanoherana tasy.
• Silika 1,6% —— Tombony: fanoherana ny hafanana.
Super Galum no marika marika ho an'ny 55% vy-zinc mifono vy. Ny Super Galum dia hafanana be ary tsy mahazaka harafesina, manambatra ny fananan'ny aliminioma izay manome faharetana mitombo, fanoherana hafanana tena tsara, formability, ary ireo an'ny zinc izay manome fanoherana hafanana avo sy fiarovana ara-pahasalamana tsara. Super Galum dia manana tanjaka harafesina in-telo ka hatramin'ny enina heny noho ny ravin'ny vy zinc mahazatra.
Ny coil condensing manokana an'ny SPL dia vita avy amin'ny fantsom-by vy avo lenta aorian'ny fifehezana kalitao faran'izay mafy. Ny fizaran-tany tsirairay dia zahana mba hanomezana toky ny kalitaon'ny fitaovana avo indrindra.
Mba hiarovana ny coil amin'ny harafesina dia apetraka ao anaty vatan-tsaka mavesatra ny coil ary avy eo atsoboka ao anaty zinc an-idina (fantson-drano mafana) ao anaty temp ny 427oC ny fantsom-boaloboka, atsangana ny fantson-drano mankany amin'ny fikorianan'ny rano mba hanomezana zavatra tsara fitarihan-drano.
Ny kabinetran'ny BTC dia mampiasa bolt dichromat hifandray, tonga lafatra kokoa ny inoam-bidy noho ny tadim-poitra mahazatra, mandritra izany fotoana izany dia manome toky fa maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny tranon'alan'ny cooler.
Ny fantsom-panafody maimaim-poana SPL'S fantsom-panafody maimaim-poana dia mijanona tsy misy clog raha manome fizarana rano tsy tapaka sy azo antoka ho an'ny etona azo antoka sy tsy misy ambongadiny amin'ny fepetra miasa rehetra. Ankoatr'izay, ny fonosana dia napetraka ao amin'ny fantsom-pizarana rano tsy misy harafana ary manana satroka farany.
Miaraka, ireo singa ireo dia mitambatra mba hanomezana fandrakofana coil tsy mitovy sy fisorohana ny refy, izay mahatonga azy ireo hanao ny tsara indrindra amin'ny rafitra fizarana rano tsy misy korontana, tsy misy fikojakojana.
Fahombiazana avo lenta Siemens mitondra motera, miaraka amina fivezivezena be sy feo ambany. Izy io dia mampiasa tombo-kase mekanika tsy voafehy voafetra, tsy misy famoahana ary fiainana lava.
Tantely karazana tantely tantely vita paty
SPL®fenoy ny famolavolana ampiasaina amin'ny tsipika condenser evaporative sy ny tilikambo S izay natao hamoahana ny fifangaroan'ny rivotra sy ny rano ho an'ny famindrana hafanana ambony. Ny toro-hevitra manokana momba ny tatatra dia mamela ny famoahana rano be tsy misy fidinan'ny tsindry be loatra. Ny famenoana dia namboarina tamin'ny polyvinyl chloride inert (PVC). Tsy ho lo na ho simba izy io ary atambatra mba hahazaka ny maripanan'ny rano 54.4ºC. Noho ny fizarana tokana misy ny tantely-sisiny, izay ifamatoran'ireo ravin-tsipika miampita, sy ny fanohanan'ny farany ny fizarana famenoana, ny fahamendrehan'ny famenoana dia fenoina, mahatonga ny fenitra azo ampiasaina ho sehatra miasa. Ny fenitra voafantina ho an'ny Condenser sy Cooling Tower dia manana toetra tsara mahatohitra afo.
Eliminator Drift azo esorina patanty
Ny elanelam-pialan'ny SPL azo esorina dia namboarina avy amin'ny polyvinyl chloride (PVC) tsy voarindra manokana, ny fanafoanana manana patanty dia mifanaraka amin'ny AS / NZS 3666.1: 20116 miaraka amina fatiantoka maherin'ny 0,001%.
Eliminators dia natao ho fanamorana ny fikojakojana izay mahatonga azy ireo ho tena madio diovina.
Basin-tehezana miaraka amina fanadiovana mora foana
Miaraka amin'izy roa mandalo mafy kokoa rafitra,ny vongan-drano dia tratra eo amin'ny lalan-tsolika anatiny, mampihena ny olana misosa. Ny endriny louver tokana an'ny SPL ho an'ny tsipika SPL rehetra an'ny N dia manidy tanteraka ny faritry ny fantsona. Voasakana avy amin'ny rano ao anaty ny condenser sy ny tilikambo mangatsiaka ny tara-masoandro mivantana, amin'izay hampihena ny mety ho fananganana ahidrano. Mihena be ny vidin'ny fitsaboana sy fikolokoloana rano. Na dia misy tsara aza ny rano miverimberina sy ny fanakanana ny tara-masoandro, ny endrika mavitrika dia misy fidinan'ny tsindry ambany. Ny fihenan'ny tsindry ambany dia miteraka fihenan'ny angovo ambany, izay mampihena ny vidin'ny fandriam-pahalemana.
Coil mandroso elitika
Ny vokatra SPL Series dia natao ho alefa amin'ny endrika kit izay mifanaraka anaty kaontenera.